गीतकार निशा श्रीसको 'मगरकी छोरी'को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक ! | Magar Media | मगर सन्चार
पोखरा, ३० मंसिर
नवोदित गीतकार निशा श्रीसको ‘मगरकी छोरी’ बोलको प्रवद्र्धनात्मक गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सो म्यूजिक भिडियोलाई टाइगर्स फिल्मस् प्रालिले युट्युबमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो ।
बागलुङ जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा छायाड्ढन गरिएको सो म्यूजिक भिडियोमा मोडलका रूपमा गीतकार निशा श्रीस स्वयं र खुशी बुढाले अभिनय गरेका छन् । गोविन्द पुनको निर्देशन रहेको म्यूजिक भिडियोको छायाड्ढन एवं सम्पादन दानबहादुर श्रीसले गरेका हुन् । बीबी अनुरागीको संगीत रहेको गीतमा जुनु रिजालको स्वर रहेको छ । हंसराज खवास ‘विजय’को कोरियोग्राफी र पुनम पुनको मेकअप रहेको म्यूजिक भिडियोमा बागलुङको गलकोटका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू घुम्टे लेक, गाईघाट झरना, हटिया बजार, हरिचौर बजारलगायत देखाइएको छ । त्यति मात्र नभएर मगर जातिको संस्कृतिका रूपमा रहेका सोरठी, घाँटु, कौह्रालगायतका लोकसंस्कृति समेत म्यूजिक भिडियोमार्फत् प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ ।
‘मगरकी छोरी’ गीतको म्यूजिक भिडियो हेर्नुहोस:
भुजेल समाजको छैठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा लोकबहादुर भुजेल चयन !
११ भाद्र २०७४, आईतवार ००:५३ admin 0
लागु औषधको कारोबार गर्दै गर्दा पक्राउ ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
सगरमाथा परोपकारी समाज कुवेत द्धारा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
बृहत मगर विद्यार्थी भेला सम्पन्न ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने लगायतका निर्णय सहित राष्ट्रिय विस्तारित भेला सम्पन्न ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
कान्छीबाट अभिनेत्री श्वेताको नेपाली चलचित्र जगतमा कमब्याक ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
आदर्श तारा स्मृती कप आयोजकको कब्जामा, पाहुना टोली काहुँ मिलन झापुटार २–० ले पराजित ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
मिनाम लाङ्घाली क्लवद्वारा खुला नकआउट फुटवल आयोजना, स्थानीय लाहुरे टिम बिजयी ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
अब घर घरमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाही पत्र ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
विजनेस एण्ड प्रोफेशनल वुमेन सुनाकोठी शाखाको अध्यक्षमा प्रतिमाया पुन चयन ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८
दमौलीमा मातृभाषामा साहित्यीक प्रतियोगिता सम्पन्न साथै मगर लेखक संघ तनहुँको अध्यक्षमा बिनु थापा मगर ! ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १८:४८